बलिउड महानायक बच्चनलाई अचानक के भयो ? कलेजोले ७५ प्रतिशत काम गर्न छोड्यो – Khabar Silo
काठमाडौं । बलिउडमा महानायक भनेर चर्चा पाएर अमिताभ बच्चन गएको ३ दिनदेखि अस्पतालमैं हुनुहुन्छ । उहाँको कलेजोमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको परिवारले जानकारी दिएको छ । अमिताभ आफैंले धेरैपटक भनेको कुरा के हो भने उहाँको कलेजोले १०० मा २५ प्रतिशत मात्रै काम गरिरहेको छ । तर ३ दिनको अस्पताल भर्नासँगै अहिले उहाँको स्वास्थ्य अवस्थामा केही सुधार आएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जानकारी दिएका छन्।
भारतीय मिडियाका अनुसार स्वास्थ्यमा अलि बढी नै समस्या देखिन थालेसँगै उहाँलाई मंगलबार २ बजेतिर अस्पताल लगिएको थियो । अहिले पनि बच्चनको अस्पतालमै उपचार भैरहेको छ । सन् १९८२ मा चलचित्र ‘कुली’को छायांकनको क्रममा चोट लागेदेखि उहाँमा समस्या हुन थालेको बताइएको छ। खबरका अनुसार छायांकनको क्रममा चोट लाग्दा उहाँलाई गल्तिले हेपाटाइटिस बी को बिरामीको रगत चढाइएको थियो ।
Posted on January 13, 2021 Author khabar silo
अनुहारमा आउने डन्डिफोर र त्यसको दागले धेरैलाई सताईउनुका साथै कुरुप पनि बनाएको हुन्छ । यस्ता दागहरु लामो समयसम्म अनुहारमा रहिरहने भएकाले मानिसहरु प्राय यसको चिन्तित बनेका हुन्छन् । कतिपयले यस्तो दाग हटाउनका लागि विभिन्न औषधिको प्रयोग पनि गर्ने गर्छन् । तर यस्तो दाग हटाउन लगाउने औषधिले अन्य छालाका समस्याहरु उत्पन्न गर्ने पनि गर्छन् । यस्ता […]
होशियार ! यस्ता खानेकुरा तताएर खाँदा स्वास्थ्यमा आइपर्छन यति धेरै समस्याहरु
होशियार ! यस्ता खानेकुरा तताएर खाँदा स्वास्थ्यमा आइपर्छन यति धेरै समस्याहरु ! व्यस्त जीवनशैलीमा हामी धेरैजसो कि बाहिरको खाना खान्छौ, कि त घरमै भएका खाना सेलाएपछि तताएर खान्छौँ वा दुई पटक खाने खाना एकै पटक पकाएर राख्छौ र पछि तताएर खान्छौ । तर, के तपाईलाई थाहा छ, कुनै – कुनै खानेकुरा सेलाएपछि तताएर खाएमा स्वास्थ्यलाई […]